Lucky Qilin Slot (ကြီးမြတ်တဲ့နဂါး) - Myanmar Online Game
နဂါးဆိုတာ အာရှနိုင်ငံအတော်အများစုမှာ အရမ်းကိုကြီးမြတ်တဲ့ Symbol တစ်ခုအနေနဲ့မှတ်ယူထားကြတဲ့ သတ္တဝါတစ်ကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပဲ ရွှေဆိုသည်မှာလဲ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်သလို အမြင်တောက်ပစေပြီး ကျက်သရေရှိတဲ့ သဘောကိုဆောင်တဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မိတ်ဆက်ပေးမယ့် Slot လေးမှာတော့ ရွှေနဂါး၊ ရွှေငါးတို့အပြင် ကျောက်စိမ်း၊ ကြေး၊ စတဲ့ အရမ်းကိုတန်ဖိုးကြီး Symbol လေးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ သူ့ကိုတော့ Lucky Qilin Slot လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျ။ Row3ခု Reel5ခုနဲ့ တစ်ခါလှည့်လိုက်တိုင်း အနိုင်ရဖို့အတွက် နည်းလမ်း 243 ခုရှိတာကြောင့် ကြည့်ရအရမ်းလွယ်တဲ့ကစားနည်းလေးတစ်ခုပါ။ သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ Free Spin Bonus Game တွေ၊ ကျက်သရေရှိပြီးစိတ်ကိုလန်းဆန်းနေစေမယ့် Symbol တွေနဲ့ ကစားသူတွေများပြားလျက်ရှိတဲ့ ဒီကစားနည်းလေးကို လေ့လာလိုက်ကြရအောင်!
Symbol တွေကို Special Symbol နဲ့ ရိုးရိုး Symbol ခွဲထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
ရိုးရိုး Symbol တွေကတော့ Payout ပိုနည်းပြီးတော့ ဖဲချပ် Symbol တွေဖြစ်တဲ့ A, K, Q, J, 10,9တို့ကိုယူထားပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ A, K တို့က3ခုတူရင် 10,4ခုတူရင် 30,5ခုတူရင် 150 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ Q, J, 10,9တို့ကတော့3ခုတူရင် 5,4ခုတူရင် 15,5ခုတူရင် 100ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ Special Symbol တွေကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်! စတီး ခရားနဲ့၊ ကြေးအိုး တို့ကတော့ Special Symbol ထဲမှာ Payout အနည်းဆုံးဖြစ်ပြီးတော့3ခုတူရင် 15,4ခုတူရင် 35,5ခုတူရင် 300 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ရွှေငါးနဲ့ ကျောက်စိမ်းအိုးတို့က ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပြီးတော့3ခုတူရင် 30,4ခုတူရင် 100,5ခုတူရင် 800 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာ မင်းသားကြီး ရွှေနဂါးကတော့ Symbol တွေအကုန်လုံးမှာ Payout နှုန်းအများဆုံးအနေနဲ့ရပ်တည်နေပြီးတော့ ဒီ Slot ရဲ့ Main Symbol လဲဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာပါ။ သူကတော့3ခုတူရင် 30,4ခုတူရင် 125,5ခုတူရင် 1200 အထိတောင်ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အရမ်းကို အစွမ်းထက်တဲ့ ပညာရှင်တွေအများစုဟာ ရှေ့ဖြစ်ဟော ဓာတ်လုံးတွေကိုအသုံးပြုလေ့ရှိကြပါတယ်။ ဒီဓာတ်လုံးတွေမှာမှ ရွှေနဂါးပတ်ဓာတ်လုံးတွေက အရမ်းကိုအစွမ်းထက်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ ဒီကစားနည်းမှာ အရမ်းကို Powerful ဖြစ်တဲ့ ဒီရွှေနဂါးပတ်ဓါတ်လုံးကို Wild အနေနဲ့ထားထားတာကြောင့် အံကိုက်ပဲလို့ဆိုရမယ်ဗျ။
Wild ကတော့ဖဲကစားနည်းမှာဆိုရင် Joker လိုပဲပေါ့။ လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာ အစားထိုးပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူအစားထိုးပေးနိုင်တဲ့ထဲမှာ Free Spin Bonus Symbol တော့မပါပါဘူးနော်။ Free Spin Bonus Symbol ကိုတော့တရုတ်အရပ်မှာတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ အလယ်လေးထောင့်ပေါက် ရွှေပြားအနေနဲ့တွေ့ရပါတယ်။ သူကတော့3ခုတူရင် 4,4ခုတူရင် 10,5ခုတူရင် 50 ပြန်ပေးနိုင်ပါတယ်။
တခြား Slot အများစုမှာတော့ Free Spin Symbol Reel5ခုလုံးမှာမပေါ်အောင် ကန့်သတ်ထားလေ့ရှိပေမယ့် ဒီမှာတော့ Reel5ခုလုံးမှာကျတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဘယ်ဘက်ဆုံးကနေစပြီး ဘေးတိုက် အနည်းဆုံး ၃ခုသာကျလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ Free Spin Bonus ရွေးလို့ရပါပြီ။ Free Spin 25, 20, 15, 13, 10 ခါထဲကကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုရွေးလို့ရပေမယ့် ဘာကွာခြားသွားမလဲဆိုရင်တော့ ကိုယ်ရွေးလိုက်တဲ့ Spin အရေအတွက်နဲ့တွဲထားတဲ့ Symbol ပဲ Free Spin မှာပါပြီးတော့ တခြား ရွေးချယ်မှုက Symbol တွေမပါတော့ပါဘူး။ Spin နည်းလေလေ ပါတဲ့ Symbol ရဲ့တန်ဖိုးကများလေဖြစ်ပြီးတော့ Spin များလေ ပါတဲ့ Symbol တန်ဖိုးနည်းလေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ Free Spin အများကြီးနဲ့ တစ်ပျော်ကြီးလှည့်မလား၊ ဒါမှမဟုတ် Free Spin နည်းနည်းလေးနဲ့ အချီကြီးရမယ့်အလှည့်ကို စောင့်မလားဆိုတာကိုတော့ ဒီရွေးချယ်မှု ငါးခုထဲက ကစားသူကိုယ်တိုင်က ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီမှာ အကြံပေးချင်တာကတော့ ကိုယ့်စိတ်နောက်ကိုလိုက်ဖို့ပါပဲ။ ကိုယ်ကနိုင်နေတယ် ကံကောင်းနေတယ်ထင်ရင် စွန့်စားပြီး Spin နည်းနည်း ရွေးတာမျိုးလုပ်လိုက်ပါ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် ဒီကစားနည်းမှာ Free Spin ရဖို့အခွင့်အရေးကအရမ်းမရှားတာဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်အခေါက်တွေများစွာမှာလဲ မတူတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်သေးတယ်ဆိုတာကိုတော့ မမေ့သင့်ပါဘူးဗျ။
ဒီကစားနည်းက တစ်ခါလှည့်တိုင်းကို အနိုင်ရဖို့ နည်းလမ်း 243 ခုရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ပုံမှန်သမာရိုးကျတွက်တဲ့ Payline ကွက်တိနဲ့တွက်တာမဟုတ်ပဲ ဘယ်ဘက်ဆုံး Reel ကနေပြီးတော့ ဘေးချင်းကပ် တန်းပြီး ကျတာနဲ့ အနိုင်လို့တွက်လို့ရပါတယ်။ ဒီလိုဆိုတော့ ကြည့်ရတာ လဲအရမ်းရှင်းပြီး Payline တွေလဲမှတ်ပြီးခေါင်းစားနေစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။
ကဲ..ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ကံတရားလေးကောင်းသွားအောင် ကျက်သရေရှိတဲ့ Symbol တွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ Lucky Qilin Slot ကိုလာပြီး ဓာတ်ကူးဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? JDBYG ရဲ့ Slot Section ကိုသာလှမ်းခဲ့လိုက်ပါနော်!